Nkwekọrịta Ọrụ Ọkwa (SLA) - Na nhazi ụwa, oge dị oke mkpa nke mere ekwenyesiri ike ka SLA bịanye aka na ụlọ ọrụ ọ bụla. Nakwa, a gosipụtara mmezi na downtime n'ihu ọha iji hụ na ha anaghị egbochi arụmọrụ.
Nkwado Ọtụtụ Asụsụ - Anyi bi na onodu aku na uba uwa dum, ya mere inwe ikike ikwado otutu asusu di n’ime atumatu onye na-ekwu okwu dika ikpo okwu na ibiputa otutu asusu di oke egwu. O di nwute, asụsụ aka nri-aka-ekpe na-abụkarị ihe a na-atụgharị uche dị ka nhazi nyiwe yana ọ na-esiri ike ịlaghachi ma degharịa nyocha ya.
Mpaghara Oge Otutu - Ọ nwere ike iju gị anya na otu ụlọ ọrụ ndị na-eto eto anaghị ewe oge oge mgbe ha na-ebipụta nkwukọrịta. Wezụga ịtọọ oge onye ọrụ ọ bụla n'ime ikpo okwu, ị nwere ike ịtọọ nkwukọrịta ebumnuche gị na mpaghara oge nke ebumnuche ebumnuche? Ọtụtụ ụlọ ọrụ nwere ntọala mpaghara oge mpaghara akaụntụ niile kama itinye oge oge niile.
A na-akpọ aha gị n'ịntanetị (yana ma ọ bụ na-enweghị mkpado). Enwere ike ịdọrọ arịrịọ a na ahịa ma ọ bụrụ na ọ bụ olile anya nyocha? Iji ahịa nkwado ma ọ bụrụ na ọ bụ a ahịa nke? Marketingre ahịa ma ọ bụrụ na ọ bụ arịrịọ mgbasa ozi?
Have nwere usoro mkpọsa nke na-etinye mbipụta mmekọrịta mmadụ na oge akọwapụtara. Mgbasa ozi mgbasa ozi gị ọ na-akpali ma na-arụ ọrụ kwụ n'ahịrị na-esite na otu ọdịnaya gị, na ndịna-emeputa gị ma ọ bụ ndị otu vidiyo, na ndị ọrụ iwu ma ọ bụ ndị njikwa gị, site na nkwado na ịhazi usoro?
Ntughari uche na ntughari uche - Na ụlọ ọrụ na nke okpuru ala, ị nwere ike itinye mkpọsa na-ege mmadụ ntị maka ndị mmadụ, ngwaahịa, na ụlọ ọrụ yana nyocha mmetụta? You nwere ike ịbido arịrịọ ozugbo n'ime ka ị mata ndị otu kwesịrị ekwesị ịzaghachi? Nwere ike ịkọ akụkọ maka oge iji hụ na ị na-enwe ezi mmekọrịta gị na ndị ahịa gị?
Mmekọrịta - you nwere ike ịrụ ọrụ n'ime ikpo okwu dị n'etiti iji kpọtụrụ, ozi, ma bipụta site na ọwa mgbasa ozi ọ bụla na akaụntụ nke ị na-achịkwa na ụlọ ọrụ ma ọ bụ nke obere akaụntụ? Nwere ike ịdọrọ data azụ na nkwado ndị ahịa gị ma ọ bụ sistemụ mmekọrịta ndị ahịa gị ma ọ bụrụ na enwere arịrịọ? Nwere ike ịkwanye nyocha ahịa na sistemụ iji nyere aka chọpụta atụmanya ma jikọọ ntụpọ n'etiti mkpọsa na ịzụ ahịa ahịa?
Njikọ Njem - you nwere ike ime ka ebumnuche ndị ahịa nke ndị ahịa na-eme na ihe omume site na ọrụ mgbasa ozi mmekọrịta gị dị ka ihe na-enye aka?
Ọ bụghị ihe niile na-elekọta mmadụ media nyiwe na-kere na bụla atụmatụ ị na-ahụ depụtara n'elu. Ana m agba ndị ahịa m ume mgbe niile ịgabiga usoro usoro mgbe itinye ego na teknụzụ ahịa nke ahụ anaghị etinyekarị ewu ewu nke ikpo okwu, onyinye ya, ma ọ bụ nkwanye ugwu nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Chọpụta Usoro Ugbu A - nyochaa ndị otu ime gị site na njikwa ruo na ndị ọrụ gị na-eche ihu na usoro mgbasa ozi ị na-arụ ugbu a. Ghọta ebe obi nkoropụ dị yana ekele maka nyiwe na usoro dị ugbu a. Nke a ga-eme ka o doo anya na ị họrọ ihe ga-eme ka mbọ nzukọ a na-agba ka mma karịa imebi ha. Enwere ike ịme nke a ka ọ bụrụ ihe nyocha dị iche na ịtụle usoro mgbasa ozi mmekọrịta gị na-esote.
Kwaga mbọ mgbasa ozi mgbasa ozi nke ụlọ ọrụ gị na ikpo okwu ọhụrụ nwere ike ịbụ ego na-akwụghachi ụgwọ na-arụ ọrụ na ahịa ahịa dijitalụ nke ụlọ ọrụ gị. Họrọ amamihe… ma egbula oge ịrụ ọrụ na a ọkachamara ma ọ bụ onye nyocha nke maara ụlọ ọrụ ahụ ma nwee ike inyere gị aka nyochaa ma họrọ onye na-ere gị ọzọ.
Hey Doug, nyocha dị ukwuu! Shoutlet bụ ikpo okwu dị ike, nke ahụ bụ eziokwu! Echere m na ị dị mma.